Tag: ederede ịdenye aha | Martech Zone
Tag: ederede ịdenye aha
Ezigbo enyi na onye ọrụ ibe gị, Megan Glover, bụ Onye isi ahịa ahịa na Delivra. Delivra bụ onye na-eweta ọrụ email nwere aha ọma maka inyere ndị ahịa ya aka na mpaghara a. Ha akpọwokwa aha otu ụlọ ọrụ kachasị mma na-arụ ọrụ na Indiana. N'oge na-adịbeghị anya, Delivra na otu ezigbo enyi ya, Adam Small, onye isi oche nke Connective Mobile - na teknụzụ ekwentị na ụlọ ahịa na-ere ahịa. Na mmekorita ya na Connective Mobile, eweputara Delivra